Chombo Chemukadzi - Matinji Anoita Basa Rei? Chombo Chemukadzi - Matinji Anoita Basa Rei?
Chombo Chemukadzi - Matinji Anoita Basa Rei?
Ndipo patinotangirawo nyaya yematinji. Matinji anovara buri reweti kuti risapindwa nezvigwere zvinobva kuzhe. Haavhari buri rinopinda chombo riri nechezasi zvisinei kuti wakadhonza matinji akareba here kana kwete. Matinji makuru kuno musoro kwakananga kubhinzi uye mapfupi chose kuzasi unopinda chombo pakuiswa nomurume.